-Waa in aynu burburinaa inta ay socod baradka yihiin | WWW.SOMALILAND.NO
-Waa in aynu burburinaa inta ay socod baradka yihiin
Wasiirka gaashaandhiga ee Maraykanka Roberts Gates ayaa maalintii axadii ka digay cawaaqiibta ka iman karta guuldarro ku timaada hawlaha NATO ka wado Afghanistan. Cawaaqiibtaas oo uu sheegay in ay noqondoonto xagjirnimadda islaamka oo sii awoodaysan doonta.
Gates oo axadii khudbad u jeediyey shir-sanadeedka arimaha ammanka lagaga hadlo ee magaaladda München, halkaas oo ah goob maraykanku tobonaan sanadood uu u isticmaalayey in uu soo jeediyo werwerku qabo xulafadiisa reer yurub.
Wasiirka difaaca ee Maraykanka ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee islaamku yahay ”mid ku salaysan guul indhosarcaad ah” , sidaa daraadedna ay aduunyadda meelo ka mid uga turjumeen guuldaro soo gaadhey in ay tahay guul ay gaadheen.
Waxaa uu intaa sii raaciyey in uu ka werwersanyahay waxa dhici kara hadii ”guushaa indho-sarcaadka ahi ay rumowdo oo ay noqoto mid dhab ah”.
-Maxaa dhici doona hadii ay u suurtogasho in ay guul ka gaadhaan Ciraaq iyo Afghanistan? Ama hadii ay u suurtogasho in ay ridaan dawladda Pakistan? Ayuu su’aalay Gates ka qaybqaatayaashii goobta isugu yimi.
Hawsheenu waa in aynu kala jajabino oo aynu dumino dhaqdhaqaaqanu inta uu yahay socod baradka. Waa in aynu yaraynaa awoodooda u sahli karta in ay khasaare aduunka u gaystaan. Waana in aynu yareynaa awooda ay leedahay edoolajiyadoodu. Xulafadeena sida ugu wanaagsan ee ay arintani uga suurtogalka tahayna waa inagga oo ku guulaysana Afghanistan ayuu yidhi Gates.
« Baadi-goobka Saliida Somaliland Muxuu wargayska Dagens Næringsliv-Oslo ka qoray shalay? Soomaalidii salaada loo diiday oo xisbiyaddu ka doodayaan »